Gtalk ကနေမသိတာမှန်သမျှ အလိုအလျောက် ဖြေကြားပေးမယ့် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု
Gtalk အသုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက်တော့ တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျ။
မသိတာမှန်သမျှ အလိုအလျောက် ဖြေကြားပေးမယ့် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုပါ။
webtoim လို့ခေါ်ပါတယ်။webtoim@gmail.com ကို add ပြီး
နောက်ပြီး ဘယ်နှစ်နာရီရှိပြီလဲ ဆိုတာတွေကို မေးရင်လဲ အဖြေက မှန်ပါတယ်။ဥဗမာ-
What is the time in Myanmar now?
June 21st 2009, 21:09:50 MMT
What is the time in ENgland now?
June 21st 2009, 15:56:00 BST
နောက်ပြီး နာမည်မကြီးတဲ့ ဘောလုံးသမားကအစ အမှန်မတိုင်းဖြေပေးပါတယ်။
myatko: Who is Sidwell?
webtoim: Steve Sidwell (born 1982), the English football player
ဘယ်မေးခွန်းကို မဆို ဖြေကြားပေးနိုင်ပေမဲ့ နောက်ဆုံးအချက်အလတ်တွေကို
မဖြေကြားပေနိုင်ပါဘူး။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လူတိုင်းအတွက် အသုံးဝင်နိုင်မယ်ထင်လို့ လို့ 
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 3:42 AM